MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA SCORKIE IYO SAWIRO - EEYAHA
Scottish Terrier / Yorkshire Terrier Isku-dhaf ah ey
'Gabbi wax dhibaato caafimaad ah ma qabin. Hada waa 7 jir. Wali way firfircoon tahay waxayna jeceshahay qarash gareynta iyo la bixida qoyskeeda. Waxay aad u ilaalisaa qoyskeeda laakiin wax badan bay ciirtaa marka aysan qof jeclayn. Iyadu waa leashed tababbartay . Way ku jawaabtaa amarrada afka ah . Noocan isku dhafka ah waa mid caqli badan. Way is raacdaa xoolaha kale . '
Scorkie ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Scottie iyo Yorkie . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Magacyada la aqoonsan yahay:
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Scorkie
IDCR = Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee Naqshadeeye®= Scorkie Terrier
Gabbi Eyga Scorkie ee 10 toddobaad jir ah— 'Gabbi waa isku-darka Scottie / Yorkie oo aad u jecel. Waxay jeceshahay inay salaaxdo oo la ciyaarto seddexdeyda carruur ah. Waxay jeceshahay inay qoyskeeda kula socoto bye-byes. Waxay miisaankeedu ahaa 4 rodol markii ay jirtay 14 toddobaad. '
Gabbi eeyaha yar yar ee 'Scorkie' ee 10 toddobaad jira
Gabbi the Scorkie oo 7 jir ah oo la joogta saaxiibkeed Yorkie.
Gabbi Eyga Scorkie ee 5 bilood jira— 'Gabbi waa isku dhafka Yorkie / Scottie. Iyadu waa mid aad u daacad ah oo jecel qoyskeeda. Waxay jeceshahay inay hooyo la ciyaarto yartayada Yorkie. Waxay jeceshahay in la qabto oo wax badan ayay salaaxdaa. Waxay jeceshahay inay bye-byes aado.
Milo ee Scottie / Yorkie ey isku dhafan (Scorkie) - 'Kani waa Milo, Scorkie oo 8 bilood jir ah oo culeyskeedu yahay 10 rodol. Wuxuu leeyahay shakhsiyad aad u Scottie ah. Isagu waa mid ka mid ah eeyaha ugu farxadda iyo saaxiibtinimada badan ee aan abid arko.
KU qashin eeyaha yaryar ee Scorkie at 4 toddobaad jir— 'Kuwani waa qaar ka mid ah sawirrada qashinkeenna Scorkie. Waxay ka yimaadeen 2 xariiqood oo dhiig oo waaweyn! Waa xayawaan gurijoog ah oo wanaagsan, oo ku fiican carruurta. Iyagu waa kuwo caqli badan, oo jecel oo daacad ah. Waxay jecel yihiin salaaxida. Waxay yihiin madadaalo iyo ciyaar, iyo kaliya cabirka saxda ah! Ma heli doono wax ka badan 10-15 rodol.
Scorkie eey 4 asbuuc jir ah
Milo the Scottie / Yorkie isku dhafka (Scorkie) - 'Milo waa caqli badan tahay! Isagu wuu wada yaqaan amarrada aasaasiga ah (fadhiiso, jiifso, gariiri, tuugso, kaalay, joog), intaas waxaa u dheer, wuxuu bartay sida loo 'istaago' intuu fadhiyo sagxadiisa. '
Milo the Scottie / Yorkie isku dhafka (Scorkie) - Markasta oo bil kasta ay dhaafto, wuxuu bilaabaa inuu qaato muuqaalka Scottie, laakiin markaan fiiriyo wejigiisa, waxaan u maleynayaa inuu kaliya u egyahay madow Yorkie . Ka sokow tababarka dheriga , wuxuu ahaa kan ugu fudud nin yaroo inaad la noolaato! Ma garanayno sidaan muddo dheer ku soo wada soconnay isaga la'aantiis!
Milo the Scottie / Yorkie isku dhafka (Scorkie) - Wuxuu jecel yahay in sidii ilmo dhabarka loogu hayo, wuuna seexanayaa haddii aad dhagtiisa xoqdo. '
Eeg tusaalooyin badan oo Scorkie ah
Sawirada Scorkie, 1
Liistada eeyaha Iskudhiska Iskudhafka ah ee loo yaqaan 'Scotland Terrier Mix Breed Dogs'
Liistada eey Yorkshire Terrier Mix Breed
rhodesian ridgeback dabeecad isku darka shaybaarka
sawirada eyga cagaarshowga
sawirada buluuga buluuga puppy
soohdinta collie weyn pyrenees qas eey
dorset olde tyme bulldogge iib ah
jack russell vs ter Territoriga
Iswiidhishka weyn ee ey isku dhafka ah